Calanka TV – 2016 – November
Halista ay leedahay marka aad dhagaha cabbeysato: VIDEO
Farsameyaqaan dhanka codka qaabisan oo u shaqeeya taleefhsinka FOX ee dalkaasi Mareykanka islamarkaana lagu magacaabo Bernie Beaudry ayaa waxaa qabsatay dhacdo naxdin leh kaddib markii uu cabbeystay dhagaha naftiisuna halis gashay.
by calanka —	November 21, 2016 —	Video
Booliska Florida oo baafinaya xubno ku lug lahaa dagaal ay ka qeyliyeen: VIDEO
Tampa Police Department ayaa baadi-goob ugu jira xubno ku lug lahaa dagaal geer iyo gaari la isku adeegsaday kaas oo lagu bur-bvuriyay baar lagu magacaabo “Ybor City bar”.
Haweeney 61-jir ah oo nin taraafiko ah ku dhigtay taariikh: VIDEO
Haweeney darawalad ah islamarkaana kusoo dhacday baaris taraafiko ayaa waxaa ay damacday in ay ka cararto ninkii taraafikada ahaa kaas oo isna dusha sare ee matoorka u fuulay. Dhacdadan ayaa ka dhacday dalka Argentina.
Malaayiin mallaay oo dhintay oo kusoo caariyay badda Long Island: VIDEO
Mucjiso lagu wareersan yahay ayaa waxaa ay ka dhacday badda Long Island kaddib markii malaayiin mallay ay oo dhintay ay kusoo caariyeen xeebaha baddaasi. Mucjisadan ayaa waxaa iminka lagu hayaa baaris.
by calanka —	November 20, 2016 —	Video
Indhool iyo dhagoole walaalo ah oo habdhaqankooda laga yaabay: SAWIRRO
Dhagoole iyo indhool walaalo ah oo ku nool dalkaasi Jarmalka ayaa waxaa ay soo jiiteen indhaha caalamka kaddib markii laga yaabay habdhaqankooda iyo sida ay isu fahmaan. Labadan walaalo oo lagu kala magacaabo Jörg iyo Rolf Fischer ayaa waxaa ay ku dhasheen dhago la`aan balse mid ayaa indhaha cudur ka[Read More…]
by calanka —	November 19, 2016 —	Sawirro
Fannaanad soomaaliyeed oo soo saartay hees loogu magac daray “Donald Trump”: VIDEO
Fannaanadda caanka ah ee soomaaliyeed Deeqa Afro ayaa soo saartay hees la magac baxday “Donald Trump” taasoo ay kaga codsanayso madaxweynaha la doortay ee Maraykanka inuu aqbalo qowmiyadda soomaali-maraykanka ah.
by calanka —	November 19, 2016 —	Video
Muxuu u ballan qaaday xildhibaan Cabdi Shire ergadii dooratay: VIDEO
Waxaa wali socota doorashada aqalka hoose ee dowlad-goboleedyada, waxaana xilshibaanada dhawaan la doortay ka mid ah abwaan Cabdi Sire Jaamac “Ciyaar jcel” kaas oo noqday xildhibaan laga soo doortay maamulka Galmudug.
by calanka —	November 17, 2016 —	Video
Mid ka mid ah hotelada Donald Trump oo magaciisa laga fujiyay: SAWIRRO
Mid ka mid ah hotelada uu magaalada New York ku leeyahay ninka jagada madaxweyne ee dlka Mareykanka loo doortay ee Donald Trump ayaa laga fujiyay magaciisa kaddib markii macaamiishii daganeyd hotelkaasi ay u codeeyeen i aysan ku qanacsaneyn arrinkaasi. Hotelkan ayaa lagu magacaabay “Trump Palace”.
by calanka —	November 17, 2016 —	Sawirro
Daanyeer jaceyl waalan u qaaday ri`afar maalmoodna ku dhaganaa: VIDEO
Daanyeel caruur ah ayaa jaceyl u qaaday ri`kaddib markii uu disheeda saarnaa afar maalmood oo xiriir ah ilaa laga dejiyo dusheeda. Dhacdadan ayaa ka dhacday dalka Shiinaha.
Arday iskool oo qaab yaab badan ku macsalaameeyay macallin ka duqoobay: VIDEO
Ardayda iskuulka Palmerston North Boys’ School ee dalkaasi New Zealand ayaa qaab yaab badan ku macsalaameeyay macallin ka duqoobay oo bayshan noqday kaas oo ay u ciyaareen ciyaarta naxdinta leh ee loo yaqaan “Haka dance”.
by calanka —	November 16, 2016 —	Video